Habdhaqanka ugufiican ee emayl gaarsiinta dadka saamaynta leh | Martech Zone
Hab-dhaqannada ugu Fiican ee Email Gaadhsiinta Dadka Waxyeelada Leh
Axad, Disembar 13, 2015 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Maaddaama ay na xereeyaan xirfadlayaal xiriirka dadweynaha maalin kasta, waxaan u aragnaa sida ugu fiican uguna xun ee meelaha lagu gaadho emaylka. Hore ayaan u wadaagnay sida loo qoro jawi wax ku ool ah iyo boggan faafaahinta ah waa dabagal weyn oo koobaya horumarka weyn.
Xaqiiqdu waxay tahay in shirkaduhu u baahan yihiin inay ku dhisaan wacyigelin iyo awood ay ku muujiyaan astaanta internetka. Qoritaanka nuxurka kuma filna mar dambe, awoodda aad u dejin karto waxyaabo aad u wanaagsan oo aad ula wadaagi karto waxay si aad ah muhiim ugu tahay istiraatiijiyad kasta oo suuq-geyn ah. Waad bixin kartaa dallacsiinta sidoo kale, laakiin taasi ma horumarin doonto tixraaca dabiiciga ah ee makiinadaha raadinta ay fiiro gaar ah u leeyihiin.
Ku fidinta xarumaha suuq geynta agagaarka abuurista iyo kobcinta xiriirada socda adoo keenaya dhinacyo kale astaantaada. Xitaa iyadoo ay soo kordhayaan dhawaanahan warbaahinta bulshada iyo ka-qaybgalka barnaamijka, emaylka ayaa weli ah mid ka mid ah hababka ugu awoodda badan ee looga qayb geli karo dhinacyada magacaaga (haddii si sax ah loo qabtay!).
Talaabooyinka Lagu Soosaarayo Habka Gaarsiinta Emailka
Qeex Hadaf - yoolalka waxaa ka mid noqon kara dhisida wacyiga noocyada, abuurista iib, dhiirrigelinta wadaagista waxyaabaha (sida sawir muuqaal ah), sahamin, ka qaybgal bulshada, ama hordhac ah.
Aqoonsiga Dhegaystayaasha Bartilmaameedka - ma waxaad beegsaneysaa dadka wax qora ee wax qora, milkiilayaasha bogagga, saxafiyiinta, tabarucayaasha daabacaadda, tacliinta, dawladda, ama kuwa aan macaash doonka ahayn?
Akhrinta, Tijaabada, Kucelcelinta - Hubso in xiriiriyeyaashaadu shaqeeyaan, isticmaal higaad sax ah, hubso naxwaha saxda ah, qorna jaan-gooyn kooban oo soo jiidasho leh.
Tani infographic laga soo qaatay Warbixinta Koorsada Internetka ku dhex maraa tiirar kasta oo lagu soo ururiyey emayllada fidinta, waxa shaqeeya, waxa aan shaqeynayn, iyo waxa gebi ahaanba laga fogaado. Tan waxaa ku jira waqtiga maalinta, maalinta usbuuca, khadadka mawduuca, ereyada la adeegsanayo, tirada isku dayga, cabirka farriinta, iyo in ka badan. Hal xaalad oo xiiso leh oo lagu wadaago xogtan ayaa ah 1 baloog-waqti-weyne u eg inuu yeesho saameyn u dhiganta 6 baloogyada yar-yar.
Tags: gaarsiinta bloggermaalinta toddobaadkaisku day emailEmail MarketingFariin emailwacyigelinta emaylkaakhrinta emaylkaimtixaanka emaylkawacyigalinta wariyetirada isku daygawarbixinta koorsada internetkawacyigelingaarsiinta dhaqanka ugu fiicancabirka farriinta emaylkakhadadka maadadawaqtiga maalinta
Caqabadaha Suuqgeynta Caqabadaha iyo Fursadaha